Rakoto David: « Fetim-bazaha ny fetin’ny maty, « halloween » | NewsMada
Rakoto David: « Fetim-bazaha ny fetin’ny maty, « halloween »
« Tsy antsika Malagasy mihitsy fa fetim-bazaha ny fetin’ny maty… Ny antsika, ny famonosan-damba ny razana no entina mahatsiaro ireo havana efa nodimandry fa tsy ny fanaterana voninkazo eny am-pasana », hoy Rakoto David, mpampianatra tantara sy fomba sady mpandala ny maha Malagasy.
Samy manana ny heviny sy izay maharesy lahatra azy moa ny tsirairay, mahakasika ny fetin’ny maty, na ny « Toussaint », tsiahivina isaky ny 1 novambra. Na eo aza io fomba malagasy io, tsy vitsy ny tokantrano mandeha manadio ny manodidina ny fasan-drazana sady manatitra voninkazo, rehefa tonga ny 1 novambra, toy ny omaly.
Raha tsiahivina, ny mpino kristianina katolika no tena manamarika ny « Toussaint », fotoana hanomezam-boninahitra ireo olo-masina rehetra. Ny 2 novambra kosa no ahatsiarovana ireo mpino efa nodimandry. Tsy mankalaza ity andro ity kosa ny mpino kristianina hafa, toy ny protestanta.
Na izany aza, tsy vitsy ny efa zatra manatitra fehezam-boninkazo eny amin’ny fasan-drazana, ny andron’ny 1 novambra. Ho an’ny eto an-dRenivohitra, raha vao io daty io no resahina, ny fitsidihana tanindrazana, ny fanadiovana sy fanatsarana ny fasan-drazana ary ny fanaterana fehezam-boninkazo no mby ao an-tsain’ny maro. Midika izany fa tsy mijanona ho fetin’ny olo-masina intsony ny 1 novambra.
Ankoatra ny hoe « Toussaint », maromaro ny firenena manamarika ny 31 oktobra hifoha 1 novambra. « Halloween » kosa ny iantsoan’izy ireo io fety io. Anisan’ireo mankalaza izany , i Irlandy, Ekôsy, Kanada, Etazonia, sns. « Fiaretan-torin’ny Toussaint » ny dikan’io fety io. Tsy tamin’ny mpino kristianina ny niaingan’io fetin’ny « Halloween » io. Na izany aza, misy ihany ny itovizana : ny fahatsiarovana ny maty.
Malazabe, rehefa tonga ny « Halloween », ny fanaovan’ny ankizy akanjo maneho ireo zavatra heverina fa mampatahotra, toy ny angatra, ny mpamosavy sy ny olona, na koa biby ratsy endrika. Mitety trano izy ireo ary mangataka vatomamy. Fetibe sy fifaliana kosa no hita any amin’ny isan-tokantrano.